Previous Article Gọmmenti Anambra Amàchie Ibugharị Ahịa Na Ịzụ Ahịa n'Okporo Ụzọ
Next Article A Gbapeela Ahịa Nkwọ Nando A Rụrụ Ọhụụ
Ụmmaka atọ ahụ bụ ndị e kwuru na ọ bụ otu nne mụrụ ha, ma bụrụkwa ndị ya bụ ọkụ ọgbụgba tara isi ha otu ụbọchị ahụ.
N'okwu ya bànyere nke ahụ, onye na-ahụ maka mmekọrịta ọhanaeze na ndị uwe ojii na steeti Anambra, bụ maazị Haruna Mọhammed, mere ka a mara na onye nwe ebe ahụ a na-ere ahịa, bụ oriakụ Blessing Nwafọr anọghị ya oge ihe ahụ mere, ma sị na ọ hapụrụ ụmụ ya atọ n'ime ebe ahụ, bụ ndị ya bụ ọkụ ahụ gbara pịatàà. Aha ụmụaka atọ ahụ bụ: Chiemerie Nwafọr gbara ahọ ise, Onyedịka Nwafọr gbara ahọ anọ, tinyere Esther Nwafọr gbara ahọ atọ. Ụmụaka atọ a bụzị ndị e burugoro ozu ha ga tinye n'ụlọ nchekwa ozu dị n'ụlọ ahụike Bex, ma ihe butere ya bụ ọkụ ọgbụgba ka bụ 'ọgbara ụwa ngharị" ruo ugbu a, ebe a na-emekwa nnyòcha miri èmì iji wee mara ebe ya bụ ọkụ sìrì wee dapụta.
N'okwu dịkwa ka ibè ya, ọkụ agbarìkọọla ebe a na-añụ mmanya n'ụlọ nkwọri àkụ King David dị n'Awka.
Dịka nnukwu onye nlekọta n'ụlọ nkwọri akụ ahụ, bụ maazị Peter Ụga siri kwuo, ya bụ ajọ ọkụ ọgbụgba bụ nke màlitere ka o jiri obere ihe gata elekere iri na otu nke anyasị, ma gbarìkọọkwa ihe ọnụ ego ya ruru nde Naịra iri ise.
E kwuru na ihe butere ya bụ ọkụ bụ njekọ eriri ọkụ abụọ nwere, bụ nke yọsara n'elu ebe ahụ a na-añụ mmanya, bụ nke e jiri akịrịka (thatch) wee tụọ, o wee bìnwuru ọkụ ma gbaa gwòò gwòò.
N'okwu ya bànyere nke ahụ, onyeisi nsọnyụ ọkụ na steeti ahụ, bụ maazị Martin Agbilli mere ka a mara na ọ natara ọtụtụ òkù dị iche iche site n'aka ndị mmadụ, bànyere ya bụ ọkụ ọgbụgba, bụzị nke mere ka o zìga ndị òtù ọrụ ya ngwa ngwa n'ebe ahụ wee sọnyụọ ya bụ ọkụ.
Ọ kpọkùzịrị onye ọbụla ka ọ kpàchara anya otu o si eme ihe ụfọdụ n'oge ọkọchị a, ma dụkwazie ndị na-atụ ụlọ akịrịka ka ha na-eme ka ọ dị àlà ma na-agbakwa ya mmiri oge ọbụla iji zèéré ọkụ ọgbụgba na ọdachi ndị ọzọ.